Amazon jiidayo hoverboards cabsi ammaanka - Rule News
Amazon jiidayo hoverboards cabsi ammaanka
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Amazon jiidayo hoverboards cabsi ammaanka” waxaa qoray Alex Hern, waayo theguardian.com on Monday 14 December 2015 09.07 UTC
Amazon ayaa bilaabay in ay jiid qaar hoverboards ka dib markii sale cabsi ku saabsan dabka keena mootooyinka is-dheelli.
Tiro ka mid ah hoverboards in la iibin on Amazon ayaa haatan la waayay, lugu daro oo dhan shan daydo mar dib loo eego by macaamiisha BestReviews site arrimaha. site Taasi hadda ka digtay-noqon lahaa iibsada in "in muddo ah, waxaan aan la soo jeedinaynaa wixii hoverboards ilaa ay muujiyeen si ammaan ah ".
Sida laga soo xigtay mid ka mid ah iibiyaha hoverboard, Swagway, iibeyey online ayaa loo baahan yahay soo saarayaasha si ay u siiyaan dokumentiyada caddaynaya in baabuurta ay "waa waafaqsaneyn heerarka ammaanka lagu dabaqi karo", iyadoo si gaar ah diiradda u batari iyo saxan for unug ka.
Like Christmas hore waa-hadiyadda electronic, ulaha sawir, hoverboards ugu yihiin macmalay ee bulk ee Shiinaha hor inta aan la iibsaday ee bulk by resellers codsada retouching la isku qurxiyo iyo brandingeksperten. Si ka duwan ulo sawir, Si kastaba ha ahaatee, hoverboards ku jira bateriga badan, kaas oo noqon kara halis dhab ah haddii ay heysa.
todobaadkii hore, hoverboard uu ku qarxay Westgate ee gobolka Washington ah, diraya dukaameeysatada galay argagax. Inkasta oo qofna dhibaato loo geysanin, maqaaladaan qaraxa sameeyey dunida oo dhan.
Horraantii December, Britain ayaa amar heerarka ganacsi digay iibsada, Iska jira, iyo shaaca ka qaaday in 88% of hoverboards ka baxsan EU-keeno, in ay baari, ay ku guuldareysatay hubinta ammaanka aasaasiga ah.
Isla mar, Leon Livermore, maamulka sare ee Chartered Standards Trading Machadka, sheegay: "Dambiileyaashu iyo saarayaasha darro inta badan ka faa'ideysan doonaan baahida sare iyo isku dayo in uu daad qaado suuqa la waxyaabaha cheap oo khatar ah. Qaar ka mid ah waxyaabaha la sameeyey dibadda, mabda 'for suuqa dibada, aan la rakibay fur saxda ah iyo fiyuuska loogu isticmaalo dalka UK. Sida ugu yaraan, macaamiisha waa hubiyo in fur saddex-pin on qalab ah dawladaha waxaa la sameeyey si BS1363. Haddii aysan u ka mid ah macluumaadkan, ka dibna ha iibsan alaabta. "
Buyers waa in sidoo kale hubi in ay fahmaan sharciga ah ee la isticmaalayo hoverboard a, taas oo aan si sharci ah loo fuuli kartaa on sallaxa ah ama jidka UK.
Inkastoo magaca, hoverboards dhab rogo guud ahaan dhulka giraangiraha.
34723	0 David Cameron, Europe, Midowga Yurub, France, af Faransiis, Getty Images, Philip Hammond, Suuriya, The Guardian-ka, Boqortooyada Ingiriiska
← Sidee waxa aan xirto saameeyaa our niyadda The 25 kulan ugu fiican ee 2015: 25-21 →